Usuku lwami lokuqala ngochungechunge lwe-Apple Watch 2. Okuvelayo ngalo | Ngivela kwa-mac
Kuleli sonto ngigcine ngikholisekile ngokuthengwa kwensiza yomuntu uqobo yakwa-Apple. Ngendlela efanayo, izolo ngibheke izinketho ezahlukahlukene ngentengo yazo nezici zazo. Ekuqaleni, ngakhetha i-Series 1 Apple Watch, kodwa ngasheshe ngayilahla. Mhlawumbe bekungaba yindlela engcono kakhulu kimi, ukuthi angizukubeka iwashi ekusebenziseni kwangempela. Ngiyifuna ngokuthanda futhi ngibone ukuthi ngingenzani ngayo, kepha anginalutho emqondweni.
Isesekeli se-iPhone nempilo yansuku zonke. Umsebenzi womzimba nemitha yezempilo. Indawo yokubona izaziso, isikhathi ngendlela enhle kakhulu nomkhiqizo wemfashini nokunethezeka. Njengoba bengisebenzisa imali, kungani ungayitholi kahle uthathe i-Apple Watch Series 2 yami? Ukumelana namanzi nokucwilisa kumamitha angama-50, i-GPS, isikrini esikhanyayo lapho u-yebo, ungasho umehluko nolunye uguquko olungashiwongo embhalweni oyisihluthulelo. Kulokhu okuthunyelwe ngizokhuluma, njengoba isihloko sisho, mayelana nosuku lwami lokuqala ne-Apple Watch kanye nemibono yami yokuqala.
1 Sishiya isitolo nge-Apple Watch
2 Usuku lokuqala nge-Apple Watch Series 2
Sishiya isitolo nge-Apple Watch
Bengivele ngikutshele ngomuzwa wokuthenga we-Apple Watch, kepha manje ngizokhuluma ngokulandelayo okulandelayo. Kwenzekani lapho ushiya isitolo futhi ubuyela emhlabeni wangempela? Ngenxa yenkonzo enhle nabasebenzi be-Apple Store, ngingayishiya ilungile lapho, ngiyivumelanise futhi ngenze yonke inqubo ukuyilungisa. Ngemuva kwalokho ngibuze "Yini enye okufanele yenziwe?" Futhi bathi: «lutho, ukuyijabulela kakhulu futhi ungakhathazeki nganoma yini». Ngishiya isitolo ngiqhubeke nge-El Centro Comercial, okukhona lapha eMurcia okuyi-Apple Store kokukodwa
Futhi ngihamba ngiya esitolo sakwaFnac, ngisabheka isikhathi. Ngizama ukuyisebenzisa futhi ngiyigqoke ngokujwayelekile, kepha ekuqaleni awukwazi ukuyeka ukuyibuka. Ujwayela khona manjalo ungaboni nokuthi ugqokile. Ukuba yi-42mm kubukeka kahle futhi kuyamangaza ukuthi kusesihlakaleni sakho. Kepha yinhle futhi inethezekile ukuthi ngeke ube nezinkinga. Futhi ungawususi usuku lonke. Kusukela ngesikhathi ovuka ngaso uze uyolala. Njalo unawe futhi isebenza njalo. Ibhethri alipheli ngokushesha noma ngabe ulisebenzisa kangakanani futhi usuku olugcwele lukugcina. Vele, ebusuku ubeka ishaja netafula, njengewashi lasebusuku ne-alamu yalo nakho konke.
Usuku lokuqala nge-Apple Watch Series 2
Uma ugeza izandla zakho, ishawa nazo zonke izinhlobo zokusetshenziswa ezenza idivayisi imanzi, uyesaba okokuqala. Kuthiwani uma iphuka? Kuthiwani uma kwenzeka okuthile? Ingaphansi kwamamitha angama-50 Futhi ne-Series 1 akufanele iphulwe ngamanzi, nayo kufanele ibe nzima. Kepha kuthiwani uma ngiyisiwula sokuqala sokuphula ngisho ngisemanzini? Manje yisikhathi sokugembula, ngoba angizizwa ngifuna ukuyikhumula ngiyogeza. Akuyona into eqhubeka isuswa iqhubeke. Akudingeki. Ukugeza naye futhi ngokuphelele. Uma imanzi mpela, iyayithola bese ikuvumela ukuthi ukhiphe amanzi esipikheni ukuze iqhubeke idlala.
Hhayi ukuklwebheka noma yimuphi umonakalo. Ungayithola imanzi, icwilisiwe, futhi kuhle ukubhukuda. Ideal ngazo zonke izindlela. Ngeke ngiphawule manje uma kufanele ukuthenga noma cha, lokho kuzongena kokunye okuthunyelwe, kulokhu noma kubhulogi elingumakhelwane kanye nomngani Objective Apple lapho nami ngiphawula ngokuhlangenwe nakho kwami ​​ne-Apple Watch nezindaba zomkhiqizo .
Ngizamile ukuziqeqesha newashi kancane. Uhlelo lokusebenza lokuphefumula, imisebenzi eyisisekelo futhi eyinhloko nezaziso. Ngeke ukwazi ukuphendula noma ufunde konke kusuka kusikrini sokuthinta esingu-42 noma esingu-38mm, kodwa kulula ukwazi ukuthi ngabe uyawuthanda yini umyalezo noma cha bese uphendula ngokushesha noma ngokubhala ngezwi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Usuku lwami lokuqala nge-Apple Watch Series 2. Ukuvela ngayo
I-Samsung Note 7 esikhundleni sayo nayo inika izinkinga